As of Thu, 06 Aug, 2020 15:10
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको गत्यावरोध कायमै छ । गत्यावरोधको अन्त्य कसरी होला भन्ने पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ । यद्यपि नेकपाका नेताले पार्टी जुटेरै अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जबर्जस्त मिलेको जस्तो देखाए पनि नेकपामा अहिले पनि सैद्धान्तिक बिन्दुमा नै मिलान छैन भने व्यावहारिक रूपमा त यसै पनि बेमेल छँदै थियो । जारी स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री भर्सेज अन्य नेताको विवाद अघिल्ला विवादकै उपज हुन् । निरन्तर देखिएकै विवादले आकार लिँदा जारी स्थायी समिति बैठक थप विवादित बनेपछि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता र नेकपा बाहेकका दल तथा नेता र सर्वसाधारणलाई समेत के नेकपा फुट्ला ? वा अझै सुदृढ भएर जाला ? भन्ने कौतूहलता निःसन्देह लागेको छ । भन्न त भनिन्छ, कुनै पनि जीवन्त पार्टीमा विचार, बहस आइरहन्छ र त्यसले आगतलाई प्रीतिकर बनाउँछ । समझदारी स्थापना गर्न स्थायी समितिको बैठक भोलि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाका केही नेतासँग जारी विवादको विषय, समाधानका उपायहरूलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको प्रस्तुति :
एकताको पक्षमा सतिसाल भएर उभिनुुपर्छ
केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगन्ज महानगर इन्चार्ज, नेकपा
२०७५ जेठ ३ गते नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ र उमंग, जोससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन पार्टी एकताको हर्षोल्लासका साथ भएको हो । नेकपाले सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै २०७५ भदौ १५ गतेभित्र एकताको सबै काम टुङ्गोमा पु-याउने प्रतिबद्धतासहित पार्टीको काम सुरु भयो । नेकपाको काँधमा दुई प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यभार आयो । पहिलो पार्टी संगठन निर्माण र एकताको सबै काम सम्पन्न गर्ने र दोस्रो सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्दै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार पूरा गर्दै जाने । तर, विडम्बना के भो भने २०७५ जेठ ३ मा नेकपा गठन भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गरियो । सो बैठकबाट सरकार सञ्चालनमा पार्टी केन्द्रको परामर्श र अन्य तहगतअनुसार सञ्चालन गर्ने तथा पार्टी एकताको बाँकी काम १५ दिनमा टुंगो लगाउने, एमसीसीबारे कार्यदल गठन गर्ने, अतिक्रमित नेपालको भूमि स्वामित्वको पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै जाने, आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम परिचालन गर्ने लगायतका विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरिएको थियो । पार्टी कामको विशेष जिम्मेवारी र सरकार सञ्चालनको विशेष जिम्मेवारीसहित सम्बन्धित निकायमा सहभागी कमरेडहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।
नेकपाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित नेपालको भूमिसहित नेपालको नयाँ नक्सा र सोहीअनुसारको निशान छापका लागि संविधान संशोधन भएको छ । यो निर्णयले नेकपा र नेपालको छवि उच्च भएको छ । नेकपा स्थायी समितिको असार १० गते सुरु भएको बैठक र यसबीचमा पार्टीको आन्तरिक बहस सतहमा पुग्ने गरी भइरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विषयवस्तुमा गम्भीर बहस, छलफल, मतमतान्तरहरू हुनु स्वाभाविकै हो । अहिलेसम्म पार्टीको सांगठनिक काम पूरा हुन सकेको छैन र सरकारबाट मनोनीत, नियुक्ति र सिफारिसहरू निरन्तर भइरहेको देखिन्छ । सांगठनिक कामभन्दा र सरकार सञ्चालनमा पार्टीको बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ । कम्युनिस्ट नीति सिद्धान्तमा नीति, विधि, पद्धति प्रधान कुरा हो र व्यक्ति गौण कुरा हो । तर, कहिलेकाहीं व्यक्ति प्रधानजस्तो देखिन्छ । त्यसैले गर्दा पार्टीभित्र बहस, छलफलहरू विवादको उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा एजेन्डाहरू अध्यक्षहरूको मन्तव्य, पार्टी एकताको बाँकी काम, सरकारको कामको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन, एमसीसी, कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सीमासम्बन्धी विषयलगायतका विविध विषयमा बहस र छलफल हुँदै गर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीजीको आफूलाई सत्ताबाट हटाउन पार्टीभित्रबाट भारतीय चलखेल भएको भन्ने भनाइले नेकपा जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । नेकपाभित्र एकताको आवश्यकता छ । मलाई विश्वास छ, धेरै हन्डर, ठक्कर, कष्टकर जीवन बिताएका नेतृत्वहरूले पार्टीको उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यकर्ताको चाहना र जनताको भावनाअनुसार नेकपामा मतदान गर्नुहुने मतदाताहरूको मन र भावनामा चोट नपु-याउने गरी निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । साथै, कुनै पनि नेतृत्वको विरोध र समर्थनमा पार्टी पंक्ति, पार्टी आबद्ध जनसंगठनहरूमा आबद्ध कोही नलाग्न र नेकपाको बलियो एकताको पक्षमा सतिसालजस्तो उभिनुुपर्छ । वर्तमानमा नेकपामा आवश्यकता पनि यही हो ।
प्रस्तुति : निरज
आशंका मेट्ने र निराशा हटाउने काम हुनेछ
अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), रुपन्देही
महामारीको सामना गरिरहेका बेलामा राजनीतिक अस्थिरता फेरि निम्तिने पो हो कि भनेर नागरिकमा एक प्रकारको आशंका र निराशा सँगसँगै उत्पन्न भएको छ । अहिले उत्पन्न भएको आशंका र निराशालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जसरी पनि समाधान निकाल्छ । समाधान पनि निस्कन्छ र पार्र्टी अझ एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ ।
हामीले यसका बारेमा यसअघि नै पार्टी कमिटीका बैठकमा व्यक्त धारणाहरूलाई लिएर पार्टीपंक्ति एवं आमनागरिकमा उत्पन्न चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छांै । अहिले पनि भन्न चाहन्छौं, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपाले आमजनतामा निराशा छाउने गरी कुनै पनि प्रकारको कदम उठाउनेछैन र सरकारका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै जानेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि सबै मिलेर कोरोना भाइरसको उचित व्यवस्थापन हो ।
नेपालमा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै समाजवाद स्थापनाको ऐतिहासिक कार्यभारसहित मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको कुरा हामी सबैका बीच जगजाहेर नै छ । पार्टी एकताको मूल भावनाअनुरूप पार्टी एकताको बाँकी कार्यलाई टुंगोमा पु-याई सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई एकताबद्ध र ऊर्जा प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा छिटो हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
पार्टीका नेताहरूले व्यक्त गरेका औपचारिक, अनौपचारिक विचारलाई लिएर आमसञ्चारले तरंगित पार्ने गरी समाचार, टिप्पणी, विश्लेषणजस्ता सामग्री प्रस्तुति गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । खासगरी राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका कुनै पनि विषय अति नै संवेदनशील हुन्छन् र अहिले त्यस्तै विषय प्रस्तुत भएको छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा देशका मिडियाले देशकै हितमा प्रस्तुति देखाउनुपर्छ भन्न हाम्रो धारणा छ ।
वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताका सवालमा र अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा सहज पहुँचका सम्बन्धमा जुन काम गरेको छ यो कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको काम हो । यसअघिका कैयन सरकार बने, ढले र फेरि बने । तर, यही सरकारले गरिरहेको छ– देशको स्वाभिमान बढाउने काम, यही सरकारले गरिरहेको छ– विश्वमा नेपालीको शिर उचो बनाउने काम, यही सरकारले गरिरहेको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी जनताको राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्ने काम ।
समृद्ध नेपाल, सुखी जनताको राष्ट्रिय संकल्पका साथ सामाजिक एकतासहितको राष्ट्रियता अझ मजबुत बनाउने, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता अझ उचो राख्नेजस्ता सरकारले गरेका युगिन महत्वका कामलाई अझ सार्थक बनाउनुपर्नेछ । कैयन् राम्रा–राम्रा र ऐतिहासिक काम भएका छन्, जसलाई जनस्तरमा व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्नेछ । सरकार र पार्टीका बीचमा अपनत्व बढाउँदै जनताका सुखदुःखमा पार्टी पंक्तिले पनि स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ एकताबद्ध गर्दै इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी नेतृत्वलाई आमकार्यकर्ताका तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्छाैं । मुलुकसामु उत्पन्न कोभिड–१९ को महामारी, सीमा समस्या र आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सिंगो राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नु आजको मूल कार्यभार हो । महामारीविरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउँदै आर्थिक पुनर्जागरणका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समय हो । गुमेका रोजगारीलाई पुनःस्थापित गर्ने, नयाँ सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादकत्व बढाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेछ ।
यही समयमा पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति नभएको भन्ने सन्देश सार्वजनिक हुनु आमकार्यकर्ताको मात्रै होइन, सारा नेपालीको मन कुँडाउने कुरा हो । यस विषयमा नेतृत्वलाई थप जिम्मेवारीका साथ एकताबद्ध हुन, सहमतीय पद्धति अवलम्बन गर्न, पार्टी पंक्ति र आमजनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने धारणा राख्न म नेतृत्वपंक्तिलाई आग्रह गर्छु । अहिले सत्ता परिवर्तन होइन, एकताबद्ध भएर राष्ट्रियता र कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनमा लाग्नु पहिलो काम हो । विगतमा मुलुक हाँकिसकेका नेतृत्ववर्गहरूले अहिले सोच्नु जरुरी छ, अहिलेको देशको माग के हो । राजनीतिक पार्टीमा बहस भइरहन्छ, अझ वैचारिक बहस त झनै हुन्छ ।
पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, कमी–कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ
अध्यक्ष, नेकपा, मकवानपुर
नेकपाभित्र अहिले भइरहेको भनेको आन्तरिक छलफल नै हो यो । सजीव पार्टीभित्र बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ । त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । अहिले हाम्रो भनाइ भनेको पार्टी एकतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । पार्टीको विधान र पार्टीको निर्णयभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । यो कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी सिद्धान्तमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टी हो । पार्टीमा छलफल हुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ ।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइन्छ । तर, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सबैले मान्नुपर्छ । यही नै हो– कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त । यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जोसुकैको पनि सर्वोच्च अंग भनेको पार्टी नै हो । पार्टीको हिसाबमा अहिले संक्रमणकालीन अवस्था हो । पार्टी एकता भएको छैन । पार्टीको सर्वोच्च अंग भनेको केन्द्रीय कमिटी नै हो । केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्नुपर्छ । नियमित पार्टीको विधानअनुसार हुने बैठकहरू नियमित रूपमा नभएको र पार्टीभित्र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मतभिन्नताहरू आएका हुन् । पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर पार्टीको अध्यक्षसम्मले पनि पार्टीको निर्णयलाई नै सर्वोपरी मानेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको गतिरोधको अन्त्य गर्नका लागि एक मात्र विकल्प भनेको पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।
पार्टी अध्यक्षद्वयले दुईजना बसेर गरेको निर्णयले बहस सिर्जना भइरहेको छ । त्यो निर्णय उहाँहरू दुईजना बसेर गरेको निर्णय हो । जेठ २ गते र मंसिर ४ गते भएको दुई अध्यक्षबीचको फरक–फरक निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ल्याएर पारित गरिएको होइन । उहाँहरूले गरेको सहमति मात्रै हो । जे निर्णय र छलफल हुन्छ त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमै हुनुपर्छ । सहमति गर्ने अनि र त्यो निर्णय किन नमान्नुभएको हो ? त्यो जवाफ त उहाँहरूले पार्टीको बैठकमा दिनुपर्छ । र, अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्नुपर्छ ।
पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुपर्छ । बैठकमा जवाफ दिनुपर्छ । बैठकमा उठेका सवाल उहाँले सुन्नुपर्छ । कमी–कमजोरी छन् भने स्वीकार्नुपर्छ र पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक प्रमुख पद भन्ने कुरा पार्टीको विधानमै उल्लेख भएको कुरा हो । त्यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नेकपाभित्रको लडाइँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको हो
अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), मोरङ
पहिलो कुरा त यो पार्टी विभाजन हुँदैन । विगतमा विभाजन हुँदा पार्टी कुन हविगतमा पुगेको थियो भन्ने नेताहरूलाई पक्कै हेक्का छ । त्यसो भएकाले नेकपा फुटिहाल्छ भन्ने मलाई चाहिं जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेको हिसाबले विश्वास छैन । पछाडि जो सर्छ ऊ सकिन्छ । एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनीतिक र वैचारिक बहस भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिलेको लडाइँमा राजनैतिक र वैचारिक दुवै छैन । यो चाहिं नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको लडाइँ हो । हाम्रा नेताहरू बढी नै महत्वकांक्षी हुनुभयो । त्यसैले गर्दा पार्टीमा बेला–बेला यस्ता विवादहरू आइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय मंसिरमा भएको सहमतिलाई टेकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । थप सुदृढ र एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । मंसिरमा नेतृत्वबीच कमरेड केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको जिम्मेवारीमा रहने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्ने थियो । त्यही सहमतिलाई अक्षरशः पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा जनतासँग घोषणापत्रमार्फत शान्ति, स्थिरता र विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौं । राजनीतिक स्थिरताबेगर शान्ति पनि हुँदैन र विकास पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा यो कुरा नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ । विवाद समाधानको विकल्पचाहिं म अध्यक्ष भएको नाताले मोरङ पार्टीले देख्छ । अहिलेको अवस्थामा तीनवटा विकल्प छन् पार्टीसित । पहिलो यही सचिवालयले तयार गरेको विधान, दोस्रो मंसिरमा नेताहरूबीच भएको सहमति र तेस्रो निर्वाचनताका जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन । यी तीनवटा चिजलाई एकै ठाउँमा राखेर नेताहरू छलफलमा बस्नुभयो भने पन्नैपिच्छे समाधान भेटिन्छ । नेताहरू जिम्मेवार बन्नुप-यो । यी तीनवटा विकल्पले पनि समाधान हुँदैन भने सबै चिजलाई थाँती राखेर आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढे हुन्छ । महाधवेशनले यी सबै विषयको फैसला गर्छ । पार्टी एकतापछि पटक–पटक विवाद हुने र मिल्ने काम भएको छ । अहिलेको विवाद पनि मिल्छ । तर, नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । देशभरका तमाम कार्यकर्ताको मनोभाव बुझेर नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विवादले कार्यकर्ता तहमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।